ကြေညာစာတမ်း - ကမ္ဘာ့မတ်လ
ပင်မစာမျက်နှာ » စာတမ်းတွင်
ဆယ်နှစ်အကြာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ဘို့ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လဒါကြောင့်များအတွက်အကြောင်းရင်းများ, ဝေးလျှော့ချခံရခြင်းမှ, ကိုခိုင်ခံ့စေပြီ။ ကျနော်တို့အာဏာရှင်တဖက်သတ်ကြီးထွားလာနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာနေထိုင်နေကြရသည်။ အစွမ်းသတ္တိအားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပဋိပက္ခများဖြေရှင်းရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂ၏အခြေခံအုတ်မြစ်အခန်းကဏ္ဍရှုံးသည်။ အများအားဖြင့်သတင်းမှားများကအသံတိတ်စစ်ပွဲတွေ, များစွာအတွက် bleeds သောကမ္ဘာကြီးကို။ ပြီးသားထုတ်ပြန်ကြေညာသည့်ဂေဟစနစ်အကျပ်အတည်းတိုးမြှင့် ရောမကလပ် ဝက်ရာစုနှစ်တစ်ခု။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဒုက္ခသည်များနှင့်အိုးအိမ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိန်ခေါ်မှုနယ်နိမိတ်မတရားမှုနှင့်သေခြင်းနှင့်ပြည့်ဝ၏တွန်းအားပေးနေကြသည်။ ပို. ပို. ရှားပါးအရင်းအမြစ်များကိုကျော်စစ်ပွဲများနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်နှိမ်နင်းအငြင်းပွားမှုများကိုအပြစ်လွတ်စေအဘယ်မှာရှိကြိုးစားနေ။ အဘယ်မှာရှိကြီးစိုးနှင့်ထွန်းသစ်စအင်အားကြီးများအကြား "ပထဝီနိုင်ငံရေးပြား" ၏တိုက်ပွဲဖြစ်အသစ်နှင့်အန္တရာယ်ရှိတင်းမာမှုများပေါ်ပေါက်။ ပင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများရှိအချမ်းသာဆုံးဒေဝါလီ၏တစ်ဦးကကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်မှာလောဘ, မည်သည့်မျှော်လင့်လူမှုဖူလုံရေးလူ့အဖွဲ့အစည်း။ ဒေါသလှိုင်းတံပိုးရုံခြယ်လှယ်များနှင့်ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဆန့်ကျင်ပယ်ချပြီးလူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုများစိုးရိမ်ဖွယ်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာအရာထဲမှာ "လုံခြုံရေး" ၏နာမ၌အကြမ်းဖက်မှုများ၏မျှတမှု, မထိန်းချုပ်အချိုးအစား၏စစ်ရေးတင်းမာမှုများ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။
El နျူကလီးယားလက်နက်များ၏ non-ပြန့်ပွားအပေါ်စာချုပ်, 1970 ထံမှ , ဝေးနျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးဖို့လမ်းဖွင့်ကနေ, ကစုစည်းထားပါတယ်
အမေရိကန်, ရုရှား, တရုတ်, R. တိန်, ပြင်သစ်, အစ္စရေး, အိန္ဒိယ, ပါကစ္စတန်နှင့် RPDCorea ၏လက်၌ယခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနျူကလီးယားအာဆင်နယ်အသင်းသည်သေမင်း၏ကနဦးကလပ်တိုးချဲ့အပါအဝင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖျက်ဆီးခြင်း၏ပါဝါကို။ အနုမြူသိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့ကော်မတီဟာလက်ရှိညွှန်းကိန်းသတ်မှတ်ထားအဘယ်ကြောင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို (ကရှင်းပြသည်ကမ္ဘာပျက်နာရီ) အကြီးမားဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကနေနေထိုင်ခဲ့အဖြစ် ဒုံးပျံအကျပ်အတည်းကျူးဘား 1962 en ။
ယနေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ဘို့2ªကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လဒါဟာအစဉ်အဆက်ထက် ပို. လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာမတ်လ22019 မက်ဒရစ်အတွက်အဆုံးသတ်ချိန်အထိအားလုံးတိုက်ကြီးကိုကျော်လွှားရန်မက်ဒရစ် 8 2020 အောက်တိုဘာလကနေထွက်သွားဖို့စီစဉ်ထားသည်။ ဒါဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အကြမ်းမဖက်ခြင်းနှင့်ဖက်ဒရယ်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပညာရေးမြှင့်တင်ကာကွယ်ရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်
ဒီမိုကရေစီ, လူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားမျှတမှု, ကျားမတန်းတူရေး, ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်လူမျိုးများနှင့်ဘဝ၏ရေရှည်တည်တံ့ရေးအကြားစည်းလုံးညီညွတ်မှု။ မြင်နိုင်ပါစေနှင့်အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဦးတည်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ convergence တွင်ဤလှုပ်ရှားမှုများ, လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်မှရှာကြံသောချီတက်ပွဲ:
"ကမ္ဘာ၏ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းထွက်ကျနော်တို့လူမျိုး " de la ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်းအဆိုပါထောကျပံ့ဖို့ ဘန်ကီမွန်းကစာချုပ်နျူကလီးယားလက်နက်များဘယ်လူသား၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဂြိုဟ်ကပ်ဆိုးကြီးနှင့်ဖြန့်ချိအရင်းအမြစ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှင်းလင်းစေပါတယ်။
refound Las ကုလသမဂ္ဂ , လူထုအခြေပြုလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးပြုပုံအနေနဲ့စစ်မှန်သို့အသွင်ပြောင်းဖို့လုံခြုံရေးကောင်စီကဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးသော ကမ္ဘာ့ဖလားငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ ။ တစ်ဦးကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်စီးပွားရေးလုံခြုံရေးအပေါ်ကောင်စီ, အစားအစာ, ရေ, ကျန်းမာရေး, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပညာရေး: ငါးဦးစားပေးခိုင်မာစေရန်။
တစ်ဦးယူဆ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအစီအစဉ်ထိရောက်သောဖြစ်ဖို့တိကျတဲ့ရန်ပုံငွေများထောက်ပံ့သော ODS (စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ) နဲ့အညီ။
တစ်ဦးကိုသက်ဝင် supremacism, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု, အသားအရောင်ခွဲခြား, လိင်အားဖြင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု, အသက်, လူမျိုး, နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်ဘာသာရေးအမျိုးအစားအားလုံးကိုဆန့်ကျင်အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ချက်များ၏အစီအစဉ် .
မြှင့်တင်ရန် ဒီမိုကရက်တစ်ပဋိညာဉ်စာတမ်းကမ္တာ့နိုင်ငံသား, အဆိုပါ complementing လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (ပြည်တွင်းစစ်, နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုစီးပွားရေး) ။
ထည့်သွင်း မြေကြီးတပြင်ပဋိညာဉ်စာတမ်း လိပ်စာ ODS ၏ "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်", ထိရောက်စွာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အခြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မဖြစ်နိုင်တော့မျက်နှာစာ။
မြှင့်တင်ရန် active ကိုအကြမ်းမဖက် ကအစစ်အမှန်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်ဒီသဘောဆောငျသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှုထောင့်မှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်နှင့်ဒေသတစ်ခုချင်းစီနေရာဒေသအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေး, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်သွေးစည်းညီညွတ်မှုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှစည်းကြပ်, အကြမ်းဖက်မှုနှင့်စစ်၏ယဉ်ကျေးမှုကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့ကမ္ဘာကြီးကိုအတင်းဖြစ်လာနိုင်အောင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ဘို့ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ.
PDF ဖိုင်ထဲမှာကြေညာစာတမ်း Download
အဆိုပါ Manifesto (ပြင်သစ်) ကို download လုပ်ပါ